Nezvedu - Chengdu Duolin Electric Co., Ltd.
Coil uye Inductors
Yakakwira frequency induction kupisa muchina
Medium frequency induction kupisa muchina
Ultrasonic frequency induction yekupisa muchina
Mvura inotonhora system
Induction Anchina muchina
Induction inokombama muchina
Induction yekugadzira muchina
Induction yekuomesa muchina
Induction kusungira & Welding muchina
Yakareba bar kupisa kurapwa muchina
Chengdu Duolin Magetsi Co., Ltd.
Duolin seye induction yekupisa muchina kugadzira uye induction yekupisa mhinduro mupiki yakavambwa mu1994Makore anopfuura makumi maviri ezvakaitika uye nhoroondo vakunda kuvimba kwakanyanya kwevatengi MuChina nekune dzimwe nyika.
Induction kudziyisa michina simba 4-2000KW basa frequency 0.5-400Khz.Product dhizaini yekutsvagisa uye kukudziridza neDuolin mainjiniya timu, uye zvakanyatso gadzira pasi pe ISO9001: 2015.Duolin seYepamusoro-tech bhizinesi, yakatenderwa inopfuura 20 yenyika patent, Ipa girini uye inovimbika simba yekugadzira nekugadzirisa mabhizinesi.
Kubva 2007, isu tave tichiita kutengeserana kwekunze uye tine vamiririri muBrazil, Germany, Argentina, UK, Iran, Russia, India, Pakistan neSouth Africa. Mushandisi wekupedzisira kuGreece, Canada Vietnam, Indonesia ... Vamwe vashandisi vekupedzisira vanga vachishanda nesu kubvira 2009.
Iyo induction yekupisa sisitimu yakanyanya kushandiswa mubillet bar isina kabhoni simbi inopisa kupisa, induction simba rekushandisa kune giya shaft vhiri pini kuomesa uye kudzimisa, refu bar induction kuomesa uye tempering, tambo bha kupisa kurapwa, pombi induction kudziya kweanopisa kukotama uye rumwe ruvara simbi kupisa. , aruminiyamu cooper ....
1. Anopfuura makore makumi maviri ezviitiko mune induction Heating indasitiri
2. Yemahara bvunzo yekusarudza muchina modhi usati watenga
3. Chigadzirwa dhizaini yekutsvaga inovandudza nekuchengetedza neDuolin Injiniya timu, muchina wehupenyu hwesevhisi
4. Edza muchina sevatengi kudziya zvinodiwa uye kuchembera anopfuura maawa matanhatu kuti uve nechokwadi chehunhu hwakanaka
5. Ipa yekumisikidza bhuku uye gadziriso yekugadzirisa
6. Shandisa akakurumbira mhando yezvinhu Infineon Omron Schneider kuverengera mhando yezvinhu
Kugadzira kutanga uye mutengi mukurusa - Simbisa zviripo kutsvaga zvakakwana
Zvese zvigadzirwa zveDuolin zvakagadzirwa zvakasununguka nemuridzi wepfuma chaiyo, anopfuura makumi matanhatu mamodheru ezvigadzirwa zvakagadzirwa mumakore gumi nematatu kuburikidza nekutsvaga kwakawanikwa maviri patent yenyika uye gore 2006 tehcnological innocation uye epamusoro tech emakambani kufanirwa kweChengdu kiyi maindasitiri mapurojekiti.
Duolin Induction Kuchenesa
Sezvatinoziva, simbi dzinogona kuumbwa muchimiro chero chipi zvacho mushure mekudziya. Pakare, gasi, marasha nehuni zvinopiswa kuti zvipise kupisa, mushure mekutamisirwa pasimbi, hunyanzvi hwekugadzira chando simbi chishandiso hunouya sekutanga. Kunyangwe mumazuvano, kune vanhu vanofarira imba yekugadzira mupfuri sezvavanofarira.
Panzvimbo pekupisa gasi uye marasha, nyowani nyowani kutsva uye simba kuchengetedza nzira yekudziya inodzoka. Inopisa kupisa tekinoroji yakauya kuChina muna 1956, yakaunzwa kubva kuSoviet Union, uye yakashandiswa muindasitiri yemotokari kunyanya. Duolin yakavambwa mu1994, yakatumidzwa neMuvambi waMr Zengxiaolin nemukadzi wake, VaZeng vakaongorora yekutanga IGBT solid States induction Heating machine naMai Zeng vachitengesa, kambani yakaita semwana wavo, ndokuzokura sevanopfuura mazana maviri evashandi timu, nzvimbo dzekutengesa. mumatunhu anopfuura gumi muChina.Muna 2007, nzvimbo yekutengesa yepasi rose yakavambwa, Duolin akavhura musika wekunze.
Zvese zvigadzirwa zvinogadzirwa neDuolin mainjiniya timu, isu tichazvipa iyo ID, iyo yakateedzana nhamba ye induction yekupisa jenareta, ndeye chete uye yakasarudzika, yakanyorwa zvese zvikamu zvinoshandiswa, kana muchina waputsika, titumire isu ID kodhi, ichawana ruzivo rwese rwakanangana nemuchina kunze, ipa yakaringana maspareti zvikamu kana kupa nyanzvi induction coil kugadzira mhinduro.One induction kudziya choto inogona kushandiswa kupisa kupisa, induction kuomesa, induction annealing, induction soldering & brazing welding kana uchibatana neakasiyana chimiro checoil. yeiyo induction kudzima.
Duolin, seChinese brand ye induction kupisa sisitimu, inogadzira anopfuura 30,000 seti michina uye inotsigira vatengi nyanzvi induction yekupisa mhinduro, yakagadziriswa turnkey induction yekutsva yekugadzira tambo zvakare, kubatsira vatengi vedu mabhenefiti kubva kune nyowani induction yekudziya tekinoroji, kunatsiridza yavo yekushanda nharaunda. tambo yekugadzira yekuchengetedza basa uye kuwedzera iyo yekudziya kugadzirwa.
Taura nesu Kuti Uwane Mamwe Mashoko